Mai Khao Beach ~ Journey-Assist - tora-pasika miaraka amin'ny fiaramanidina!
Pejy fandraisana » Phuket » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Mai Khao Beach
Ao Khao Beach - Phuket
Ny fomba fijery momba ny Mai Khao Beach
Mai Khao ao amin'ny sari-tany
Weather in Mai Khao
Saripika sy horonantsary ao Khao Beach
Ny trano fandraisam-bahiny akaikin'izay Mai Khao Beach
Hevitra momba an'i Mai Khao (valin'ny Google)
Mai Khao valiny (Tripadvisor.com)
Beach miaraka amin'ny fiaramanidina - Mai Khao
Mai Khao Beach dia torapasika malaza any Phuket. Manana refy lehibe, 11km ny halavany. Any amin'ny Valan-javaboary Sirinat no misy azy. Ity dia iray amin'ny toerana tena ankafizin'ny mpitsikilo - olona tia mijery filokana ary mandray fiaramanidina.
Prices ao amin'ny Mai Khao Beach
Ny fidirana ho an'ireo mpizahatany amin'ity tora-pasika ity dia karama - 200 Baht. Angamba noho io antony io dia tsy feno olona io torapasika io, na dia eo aza ny fepetra tena tsara eo. Tian'ny mpiasan'ny tanana koa ny fotoana fialany eto.
Madio ny rano eto, ary saika tsy misy rano matevina - tsy miadana ny mando. Mavo, lehibe ny fasika. Tsy maro ny aloky ny tora-pasika, na izany aza, fa tsy lavitra ny morontsiraka. Bibilava maro no mibontsina amin'ny fasika. Mai Khao dia mazàna amin'ny maraina.
Ny fiaramanidina fiaramanidina, indrindra fa ny lehibe dia afaka manangona rahona fasika.
Ity tora-pasika ity dia heverina ho toerana tsara tokoa ho an'ireo sary mahaliana ny tenanao eo amin'ny zoron'ny fiaramanidina esorina.
Mandrara ny fitiavan-tena amin'ny fiaramanidina! Mai Khao Beach
Fa kosa, tokony homarihina fa ny fitiavan-tena eo am-pototry ny fiaramanidina amin'ity tora-pasika ity dia voarara hatramin'ny Aprily 2019:
Ny mpitsidika mitsidika ny morontsiraka Thailandy Mai Khao, izay ny sary nentin-drazana araka ny fomban'ireo fiaramanidina mivezivezy dia tsy maintsy hamono ny fakantsarin'ny telefaonany sy hanala ny fakantsariny, raha tsy izany dia mety hiatrika ny fanamelohana ho faty.
Ny lehiben'ny seranam-piaramanidina Wichit Kaotaitiam dia nilaza tamin'ny Bangkok Post fa, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny International Civil Aviation Organization, ny fitsipika sy sazy hentitra amin'ny alàlan'ny Air Navigation Act dia tokony hampiharina amin'ireo mpandika ny fiarovana ny fifamoivoizana.
Ny mpandika lalàna dia voalaza fa hosazina mafy - ny sazy 40 baht (000 dolara) na ny fanagadrana hatramin'ny 1253 taona dia azo atao.
Aiza Mai Khao Beach
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/FJVEzihFzaabLium9
Mai Khao Beach amin'ny sari-tany
Weather in Mai Khao Beach
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny any Mai Khao.
Amboary ny widget mba hifanaraka amin'ny mahaliana anao. Ao amin'ny zoro havanana havanana dia misy bokotra fidirana menu izay ahafahanao misafidy izay fampahalalana tianao haseho ny widget. .
Sary sy horonan-tsarimihetsika Mai Khao Beach
Hevitra ho an'ny Mai Khao Beach (valin'ny Google)
Mai Khao Beach valiny (Tripadvisor.com))
vaovao taona Ny ankamaroan'ny vato
Hmm .. tora-pasika kely mahaliana .. Ary hita fa nahita azy aho rehefa tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina Phuket)
Vote for0Voice against valiny